I-Classy, Rustic & Relaxing...I-Quiet Getaway
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguBarbara
PHAKATHI IVEKI KAJANUWARI EKHETHEKILEYO. BETHA AMATHAMBO! Ngaba ujonge indawo ezolileyo kude nesiphithiphithi? Ngaba yindawo yokuphumla yangasese emva kosuku olunzima? Ungajongi ngokubhekele phaya. Sinikezela ngendlu yabucala, enefenitshala ngokupheleleyo ukuya kuthi ga kwizinto ezibalulekileyo. Ibekwe ngokufanelekileyo ecaleni kwe-Hwy 16W ngaphandle nje kwedolophu yaseHinton kunye nemizuzu engama-45 yokuqhuba ukuya kwiDolophu yaseJasper. Nokuba undwendwela i-Hinton, ujonge i-adventure kwi-Jasper National park okanye udlula kuyo singakuvuyela ukukwamkela.
Ukungena kwikhaya ngokwalo uya kuyibona iqhayisa malunga ne-1600sqft yendawo, ikhitshi epheleleyo enayo yonke into oyifunayo ukupheka isidlo kude nekhaya, igumbi lokuhlala, i-1/2 yokuhlambela kumgangatho ophambili kunye netafile yephuli kwabo baziva bephezulu. umdlalo. Phezulu uya kufumana amagumbi amabini okulala ngalinye linebhedi ephindwe kabini, elinye linendawo yokulala enye ngaphezulu. Nandipha ubusuku obugcweleyo ulale ngamashiti athambileyo, atofotofo. Uya kulala kamnandi iindwendwe ezi-5. Igumbi lokuhlambela eligcweleyo ligcwele yonke into oyifunayo ngelixa ungekho. Ukuqinisekisa ukuba uzinzile kwaye unesiqalo esihle, sikubonelele ngezinto zokuqala ezilula zasekhaya kunye nezinto zangasese ezisisiseko. Ukuhlala ixesha elide, kunokufuneka uzalise izinto njengoko zifuneka kusetyenziso lwakho. Sinikezela ngeendawo zokupaka ezigqunyiweyo ezineplagi ekhoyo, ke ngoko kungabikho mfuneko yokuba ucoce isithuthi sakho ukuba kunekhephu :) Gqoka ngasesitovini sokhuni ngesiselo osithandayo emva kosuku olude lomsebenzi wangaphandle.
4.97 out of 5 stars from 108 reviews
4.97 · Izimvo eziyi-108
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi108
Sinethamsanqa lokuba nomjelo ohamba phakathi kwepropathi. Ukuba kwenzeka ukuba kube yimini eshushu yasehlotyeni, zikhululeke ukuqubha okanye uhlale elunxwemeni kwaye uthathe ilanga elithile. Ngorhatya lwasehlotyeni ungasibamba isondla iintlanzi emlanjeni :)
Umbuki zindwendwe ngu- Barbara
Ukuba asikufutshane ungasifumana ngefowuni okanye ngetekisi :)
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-$390
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Hinton